A Comprehensive Stroke Resource Gwaro
Sitiroko chirwere chemuviri chinomuka semhedzisiro yekusakwana kweoksijeni kuuropi. Kudimbudzira kana kuomesa kwetsinga kunokanganisa kutenderera kweropa mutsinga dzeuropi. Izvi zvinokonzeresa kuti kupa kweoksijeni kuuropi kudimburwe. Mune zvakakomba mamiriro, tsinga dzinogona kutsemuka dzichikonzera kubuda kweropa kwemukati mukati meuropi. Sitiroko, inozivikanwawo seCerebro Vascular Accident (CVA), ndiyo imwe yezvikonzero zvekufa kwevanhu muUS Muna 2006, zvinofungidzirwa kuti vangangoita zviuru mazana matanhatu nemazana mana ezviuru zveUS vakatambura sitiroko. Saka, izvi zvinoratidza kuti paavhareji, mumwe munhu anotambura nesitiroko mumasekondi makumi mana.
Pane zvinhu zvinoverengeka zvinoita kuti uve nesitiroko, senge:
Yakakwira ropa cholesterol cholesterol inotungamira kune atherosclerosis
Kushungurudzika mumoyo kurova
Mukuwedzera, kusvuta, kunwa, kuneta, uye kukwegura zvimwe zvakakosha zvinokonzera zvinhu.
Ruzivo rweZvinhu Zvengozi
Yekuwedzera Ruzivo nezve Njodzi Zviitiko
Stroke & Yakakwira Ropa Kudzvinyirira
Kusvira & Stroke
Chirwere cheshuga, Zvirwere zvemoyo, & Stroke
Yakakwira Ropa Cholesterol
Kuona / Yambiro Zviratidzo
Kusakwana kweoksijeni kuuropi kunokanganisa mashandiro ayo akajairwa. Zviratidzo zvinonyevera kuti mumwe munhu angave ari kurohwa nesitiroko zvinosanganisira:
Kamwe kamwe kwakakomba musoro
Kushaya simba kana chiveve mune rimwe kana mamwe makumbo, kazhinji anokomberedza rumwe rutivi rwemuviri
Kutaura kwakamonyana kana kuremara
Kurasikirwa kwekuyera pamwe nekubatana
Nekuti kurohwa kunogona kuitika kune chero munhu, uye mhedzisiro inogona kuve yakanyanya, iyo yakakosha kukwanisa kuziva zviratidzo izvi pazvinoitika. Zvakare, zvakakosha kutsvaga rubatsiro rwekukurumidza. Muzviitiko zvakakomba, masekondi anogona kuita mutsauko.
Kuwedzera Kunzwisisa Stroke Kuonekwa
Zviratidzo & Zviratidzo
Stroke Zviratidzo & Zviratidzo
Sitiroko dzakakamurwa pasi pemisoro mikuru miviri: Ischemic kana Cerebral Infarction: Muchiitiko ichi, sitiroko inokonzerwa neropa risingakwanise kuuropi. Kutenderera kweropa mumidziyo yeropa kunovharirwa, zvichikonzera kushomeka kwekuwanisa okisijeni kuuropi. Aya anovharirwa anonyanya kukonzerwa nekuda kweropa rinobva atherosclerosis. Ropa rakagwamba rinoyerera kuburikidza neropa kuyerera uye rinokonzera kuvhara mumatumbu madiki europi. Kunobva kurohwa kweIschemic kuri kunyanya mutsinga yecarotid inomuka kubva kuorta yakaiswa pamusoro pemoyo chete. Inenge 85% yemakaro ari Ischemic mune zvakasikwa.
TIA (Transient Ischemic Attack) yakafanana nesitiroko, asi ndeyepfupi uye inokanganisa kukanganisika muhupombwe hweoksijeni. TIAs hazviwanzo kukonzera chero kuremara kusingaperi kana zvakakomba mhedzisiro, kunyangwe iwo angave mucherechedzo wedambudziko rakakomba. Mazhinji maTIA anoonekwa mushure mechokwadi zvichienderana nerondedzero yezviratidzo, izvo zvinogona kusanganisira kuvhiringidzika, kupera kwechinguva kana kushaya simba, uye matambudziko nekuenzanisa kana kubatana.
Pano, kuputika kunoitika muropa reropa muuropi, zvichikonzera kuenzana kusvika kune zvakanyanya kubuda mukati. Izvo zvinoitika kazhinji kazhinji semhedzisiro yekushomeka kwemaseri emadziro pane imwe nhanho, a mamiriro anozivikanwa seaneurysm, asi inogona zvakare kuitika semhedzisiro yekushungurudzika kwemusoro. Ichi chirwere chekubuda ropa; isu tinoona izvi mune ingangoita 15% yezviitiko. Uropi hunotarisisa pakuvapo kweropa risingabhadharike, uye maitiro anoitika semhedzisiro yekubuda kweropa mukati anogona kunge akaenzana, kana zvisina ngozi kupfuura kukanganiswa kweropa.
Kubuda ropa mukati mehuropi kunoenderera zvakare kuiswa pasi peSubarachnoid Hemorrhage uye Intracerebral Hemorrhage. MuSubarachnoid Hemorrhage, tsinga dzeropa dziri muuropi dzinotsemuka uye ropa rinozadza nzvimbo dzese dzakazara dzemvura mune dehenya nehuropi. Izvi zvinogona kukanganisa vanhu vezera ripi zvaro. MuIntracerebral Hemorrhage, tsinga iri muuropi inotsemuka nekuda kweropa rakakwira, ichizadza matishu akakomberedza muuropi.
Ruzivo rweMhando dzeStroke
Ruzivo rweIschemic Stroke
Inopera Ischemic Attack
Vashandi uye varapi vemakamuri ekukurumidzira kutenderera pasirese vanoziva zvechinyakare zviratidzo. Izvi zvinowanzo guma nekukurumidza kuedza kwekusimbisa kana kutonga kunze kwe stoke kuongororwa. Kunyatso kuongororwa kwekufungisisa uye mhinduro dzemurwere zvinotungamira kuferefetwa. Kufungidzira matekinoroji akadai seCT-scan, ECG, uye MRI anoitiswa nekutaurirana neyeurologist kuti aongorore sitiroko. Chiremba anounganidza ruzivo rwese nezvenhoroondo yezvokurapa yapfuura nemishonga kuitira vane chirwere cheshuga uye vane chirwere cheBP.
Nyowani Kuongorora & Kurapa Sarudzo
Kudzivirira & Kuongorora
Iyo Yese Brain Atlas
Kurapa kweschemic sitiroko kunoitika nekupa mishonga nekukurumidza zvinogoneka kuputsa iko kuvhara kunokonzera sitiroko. Tissue Plasminogen Activator (TPA) inorowa muropa kuburikidza neruoko mukati memaawa mashoma ekurohwa. Zvakare, vashandi vezvekurapa vanopa vamwe vanoonda ropa (heparin, aspirin) uye maanticoagulants ekukurumidza kupora. Uye zvakare, muyero wemushonga zvinoenderana neiyo ezvinhu yemurwere.
Mune zvimwe zviitiko zvakakomba, kupindira kwekuvhiya kunoitika kubvisa mabhureki makuru. Varwere vane aneurisms vanogamuchira kutapudza uye kurapa kurapwa. Mune "clipping" maitiro, vashandi vekurapa vanoisa clip pazasi peineurysm ku kudzivirira ropa kubva pakupinda. Mhinduro isingaperi, asi inoda kunanga kupinda muuropi kuburikidza nehenya. Maitiro ekuchaira ndeaya nyowani kukura, uko kateti diki inosvitswa kuburikidza neyechikadzi tsinga muchidya uye, nerubatsiro rwehunyanzvi hwekufungidzira tekinoroji, yakakwira kumusoro kuenda kunzvimbo yeaneurysm muuropi. Tambo diki yeplatinamu inounzwa mune aneurysm, iyo inoumba coil inotenderedza iro ropa rinovhara. Izvi zvinozadza aneurysm, iyo inodzivirira kuenderera mberi kubuda ropa.
Kuvhiya Aneurysm Kucheka Vhidhiyo
Mushure mekunge murwere apora, vanowana kutarisirwa chaiko uye kutariswa kudzikisa kuitika kwe kuremara kwenguva refu uye kudzosa murwere kune zvakajairika mamiriro nekukurumidza sekunge zvinogoneka. Zvichienderana nekuomarara kwesitiroko uye mhedzisiro yacho, izvi zvinogona kusanganisira kugara uchirovedza muviri, kurapa kwekutaura, uye kumwe kuchengetwa kwekubatsira nerubatsiro rwevanyanzvi. Muzviitiko zvakawanda, zera rinokanganisa kudzosera iyo kufamba yemurwere wekurohwa asi kuburikidza nekuchengeta kwakanyanya uye nerutsigiro rwemhuri, mamiriro acho anogona kunge ari yakagadziridzwa. Muna 2006, paive nevanhu vangangosvika zviuru zana nemakumi masere nezviuru vakafa nekuda kwekurohwa nesitiroko, asi nhamba iyi inoratidza kudzikiswa kukuru nekuda kwenzira dzekuongorora nekurapa kwazvino.
Chekupedzisira, kufungidzira kwenguva refu kwevanopona kunogona kusiyana zvakanyanya zvichienderana nekukura kwesitiroko, uye hutano hwemurwere. Varwere vanozowana kupora kwakazara vanogona kutora kusvika gore kuti vadaro. Vamwe varwere vanorwara zvizere, asi vanogona kuramba vachirwara nepfungwa, izvo zvinogona kunge zviri mhedzisiro yekukuvara kwezvikamu zvehuropi, kana kuratidzwa kwekushungurudzika shure.
Chiitiko chemuviri & Exercises
Zvinyorwa zveStroke Vakapona
Stroke Kuzivisa Kune Wese Munhu
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndeyekuti chikwereti chidzokere kune yedu saiti.Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri na1800wiricheya; tinopa migero yewiricheya, kufamba-famba vanofamba,mobility scooters, & vanofamba.
Autism: Pane Iyo Spectrum
Down Syndrome (muVana neVakuru) Zviwanikwa Pamhepo